SIR CULUS: Dhaqaatiirta Ilkaha Ma Jecla in Aan Sirtan Ogaano | Xaqiiqonews
SIR CULUS: Dhaqaatiirta Ilkaha Ma Jecla in Aan Sirtan Ogaano
qiyaastii 75% dadku ilkahooda ma ahan kuwo toosan, 25% oo kaliya ayaa leh ilka toosan iyo qaniinyo sax ah.
“Waa uu mahadsanyahay afkeyga yar ilkaheyga waa kuwo is dul saaran”Lakab ah” ayey tiri gabar wariye ah oo ka sheegeysay sida ay ugu faraxsantahay ilkaheeda aan toosneyn.
Hase yeeshee dadka oo dhan sidaas ma ahan qaar badan ayaa lacag badan iyo waqti ku bixiya sidii ay ku heli lahaayeen wax ay ugu yeeraan “Doolacaddeynta Hollywood-ka”
Dhaqtar Yiri” Laga Bilaabo Birri ragga Uur wey qaadi karaan weyna dhali karaa(Ogow Sababta)
Dhaqtar Wax yar ilkaha iga qalooci!
Dalka Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan ee dadku ay aaminsanyihiin fikradda ah “ilkaha toosan” taasina waa sababta inta ugu badan tobon jirada Ameerikan ah ay ilkahooda ugu dabrayihiin biraha ilkaha toosiya.
Balse dalka Japan waa dalka ugu badan ee dadka ay ku faanaan in aysan laheyn “ilko toosan”, taasina waa sababta fikradda “Yaeba” ay tahay mid loogu faano gudaha dalka Japan.
Yaeba waa qofka oo faayihiisa ay dulsaaranyihiin maciyaha sida kaga muuqata sawirka hoose.
Gabar Japan oo wadata dhaqanka Japan ee “Yaeba”
Toosinta Dabiiciga ah
Si kasta oo dadweynaha aduunka ugu kala fikrad duwan yihiin maxaa quru x ah maxaa foolxumo ah, hase yeeshee waxaa jira hal arin oo qasab ay tahay in aan xisaabta ku darsano, waxaan u baahanahay in aan toosino ilkaha, hadii ay sababayaan caafimaad darro, amaba hadii ay keenayaan kalsoonida qofka oo hoos u dhacda.
Waxaana qeybta hoose aan idinku soo gudbineysaa qaabab dabiici ah oo aad u toosin karto ilkaahada adiga oo aan tagin dhaqtar.
Hadii aad rabto in aad ogaato sida carrabka ilkaha u toosiya ama u qaloociyo, ugu horeyn waxaa muhiim ah in aaad fahanto sida ay u shaqeeyaan “biraha ilkaha lagu toosiya”.
Biraha ilkaha “Braces” ayaa isticmaala “Cadaadis yar” iyagoo iliga saaraya cadaadis si ay ugu riixaan dhinaca loo baahan yahay. Haddaba xasuusnow in aad afka ku wadato qalab ku siin kara cadaadis yar oo aad iliga ku riixdo waana carrabka.
Istcimaal carrabkaada una riix iliga/ilkaha dhinaca aad rabto, kana dhig caado aad sameyso marka aad wax aqrineyso, daawaneyso TV iwm, muddo dheer ka dib waxa aad arki doontaa natiijo,.
Caruur badan ayaa dhuuqa suulka, taasina waxaa laga yaaba in ay ku keento markii ay caadadaasi wadaan muddo xaalado caafimaad darro oo ilkaha la xariira, sida in ilkaha kore ay horay u soo baxaan taasi oo afka ingiriiska lagu yiraahdo “Over bite”
Faraheena kaliya ma ahan in ay nagu sababaan cafimaad darro, sidoo kale waxa ay hagaajin karaa caafimaadkeena hadii aan u isticmaalno si habboon.
Cadaadis yar oo joogta ah adiga oo isticmaalaya fartaada/farahaada waxa ay keeni karaan isbadal, isticmaal fartaada kuna riix iliga qaladka ka jira una riixa dhinaca aad go’aansatay, muddo ka dib waxa aad arkeysaa natiijo, xasuusnow in cadaadiska xoogga ah uu keeni karo natiijo aadan go’aansan.
Cadeyka oo si jilicsan aad uga toosisaa iliga, aadna u riixdaa dhinaca aad rabto, muddo dheer ka dib caadadada noocani ah ayaa isbadal ku keeni karta ilkahaada.
Gagabo: dhamaan talooyinka halkani ku xusan ma ahan kuwa xalin kara nooc walbo oo qalad ah, kaliya waa caawiyaal aad waxtar u leh,hadii xaaladaada ay tahay mid aad u daran, waxaa lagula talinayaa in aad la tashato dhaqtar.